Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland Prof ABshir Awyuusuf oo Xaflad Sagootin ah Loogu Qabtay Dalka Maraykanka – Puntland Voice
June 23, 2015 9:51 am Views: 41
Wasiirka cusub ee wasarada waxbarashada Puntland Abshir Aw-Yuusuf Ciise ayaa munaasibad lagu sagootinayo waxaa loogu sameeyay magalada Minnepolis ee wadanka Maraykanka.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa wasiir Prof Abshir kula dardaarmay inuu si cadaalad ah u maamulo hanaanka waxbarashada. Waxayna sheegeen inay muhiim tahay inuu halkaasi kasii dhaqaajiyo heerka wanaagsan ee waxbarashada Puntland joogto.
Wasiir Abshir Ciise ayaa dhankiisa balan qaaday inuu horumar wacan gaarsiin doono waxbarashada Puntland. Aqoon yahamiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka ayuu ka codsaday inay garab istaagaan si guulo waa weyn looga gaaro waxbarashada Dalka.
PROF.Abshir Aw-Yuusuf ayaa xilkan loo magacaabay isagoo dalka ka maqan, waxaana lagu wadaa inuu maalmaha soo socda soo gaaro Puntland si uu xilla ugala wareego wasiirkii hore Cali Xaaji Warsame.
Prof Abshir ayaa kamid ahaa barayaashii jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed ee Lafoole Waxaana loo yaqaaney xilligaasi Abshir Physics maadama uu ahaa nin ku takhasusay maaddada fiisigiska, waana nin wax badan kusoo kordhinkara hannaanka wasaaradda waxbarashada ee Puntland.